အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချိန်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း - WITNESS Blog
 Posted on eyewitness, Internet Shutdowns, Tactics, takedowns, Tools
၂၀၁၉ဇွန်လမှစ၍မြန်မာနိုင်ငံတွင်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုနှင့်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကြပ်အတည်းပြဿနာများဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိရာနိုင်ငံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားတယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီများ သည် ယင်းတို့၏ မိုဘိုင်းအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများကို ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် အိမ်နီးချင်း ချင်းပြည်နယ်တို့တွင် ဖြတ်တောက်ထားခဲ့သည်။
‘ငြိမ်းချမ်းရေး၏အနှောင့်အယှက်များ’နှင့်တရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများ’ဟူ၍ကိုးကားပြီး လူများ၏အကျိုးအတွက် အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းကို ဥပဒေပြဌာန်းသည်ဟု မြန်မာအစိုးရက ပြောဆိုခဲ့သည်။ အဖြစ်မှန်မှာ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းကြောင့် လူသန်းပေါင်းများစွာအား မရှိမဖြစ်သော သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးကိုအသုံးပြုခွင့်၊လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကြိုးပမ်းမှုများကိုရပ်တန့်စေခဲ့သည်။
“ထိုကဲ့သို့အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းသည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိစစ်ပြစ်မှုကျူးလွန်းခြင်းများအတွက်စစ်သွေးကြွများကိုပစ်မှတ်ထားစေကာမူ အချိုးအစားမညီမျှသော ဖြတ်တောက်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်” ဟု Fortify Rights အဖွဲ့မှ Matthew Smith က ဖော်ပြခဲ့သည်။
အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းအား၂၀၁၉စက်တင်ဘာလတွင်မြို့နယ်၅မြို့နယ်၌တစိတ်တပိုင်းရုပ်သိမ်းပေးခဲ့သော်လည်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်သည်။ထိုတစ်လတည်းမှာပင်ရိုဟင်ဂျာလူများစုထွက်ပြေးခဲ့သောအိမ်နီးချင်းဘဂ်လားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွင်လည်းသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များက3G/4Gservicesများကိုပိတ်ဆို့တားဆီးရန် တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာများကို ညွှန်ကြားခဲ့ပြီး ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် တယ်လီဖုန်း SIM ကဒ်များ ရောင်းချခြင်းကိုရပ်ရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ နှစ်ဆန်းပိုင်းမှစ၍ ရခိုင်ပြည်နယ် ၄ မြို့နယ်အား ကမ္ဘာနှင့် အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်စေခဲ့ပြီး ဘဂ်လားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရှိ ဒုက္ခသည်စခန်း များတွင်လည်း ဝန်ဆောင်မှုကို ဆက်လက်၍ကန့်သတ် ထားခဲ့သည်။
အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းသည်ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်းမြင့်တက်လျက်ရှိသည်။AccessNow’s ၏ #KeepItOn campaign အရ ၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီမှဇူလိုင်လအတွင်း (၁၂၈) ကြိမ်၊၂၀၁၈ တွင်(၁၉၆ )ကြိမ် တို့မှာ၂၀၁၇ တွင်(၁၀၆)ကြိမ်၊ ၂၀၁၆ တွင် (၇၅) ကြိမ်များနှင့် နှိုင်းစာလျှင် သိသာစွာမြင့်တိုး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင် အစိုးရများသည် ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများနှင့်ပူးပေါင်းပြီး အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းကို နည်းဗျုဟာတရပ်အနေဖြင့် တိုးမြှင့်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လူထုအားဖိနှိပ်ခြင်း၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကို တားဆီးခြင်းနှင့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု အချက်အလက်များကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် မျှဝေခြင်းများကို ရပ်တန့်စေခဲ့သည်။
“အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများသည် ချိတ်ဆက်မှုရှိရှိဖြစ်ပေါ်နေသည်” –Berhan Taye, AccessNow
ပလက်ဖောင်းအထူးပြုပိတ်ဆို့တားဆီးခြင်းဖြစ်သောရေပန်းစားသောappနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို ပိတ်ပင်တားဆီးခြင်း၊မိုဘိုင်းဒေတာကိုဖြတ်တောက်ခြင်း၊အင်တာနက်မြန်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် အင်တာနက်ကိုလုံးဝဖြတ်တောက်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။အထက်ပါပိတ်ပင်ခြင်းအားလုံးသည်အချိန်နှင့်တပြေးညီသတင်းအချက်အလက်များဆက်သွယ်ပို့ဆောင်ခြင်း၊ချိုးဖောက်မှုများကိုဖော်ထုတ်ခြင်းကို အနှောင့်အတားဖြစ်စေသည်။
ထိုအခြေအနေများသည် လူထုဆန္ဒပြခြင်း၊ မဲဆန္ဒပေးခြင်းနှင့် နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်သည့်အချိန်များတွင် မကြာခဏဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပြီး ပြည်နယ်တွင်း ဖိနှိပ်ခြင်း၊ စစ်တပ်၏ထိုးစစ်နှင့်အကြမ်းဖက်မှုများ မြင့်မားချိန်နှင့် မကြာခဏအတူတကွဖြစ်ပေါ်သည်။အာဏာပိုင်အစိုးရအနေဖြင့်အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းကို လူထုလုံခြုံရေးသို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းပြချက်များရှင်းလင်းဖော်ပြသော်လည်းထိုဖြတ်တောက်ခြင်းမှာ ဖိနှိပ်ခံရသောပြည်နယ်များတွင်ယင်းလူထုအားသတင်းအချက်အလက်နှင့်နိုင်ငံရေးဇာတ်ကြောင်းများ ထိန်းချုပ်နိုင်မှုပျောက်ကွယ်မည်ကိုစိုးရိမ်ကြောင့်ကြသည်မှာထင်ရှားလှပေသည်။အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းသည်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊လူအများ၏ဘဝနှင့်ရှင်သန်ရေးကိုဟန့်တားခြင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံး
လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းသည် အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားသည့် အချိန်တွင် ယခင်အခါများထက်ပိုပြီးအရေးပါသည်။
အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းကဲ့သို့စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောင့်အတားကြားမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အချက်အလက်များကို လုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းရန်သည် ကျိန်းသေပေါက် အန္တရာယ်ရှိပြီး စွန့်စားရသော စိန်ခေါ်မှုတရပ်ဖြစ်သည်။
တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူများသည် အချက်အလက်များကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်
ဗီဒီယိုများ ထိန်းသိမ်းခြင်းအပြင် အော့ဖ်လိုင်း(offline)အချိန်တွင် မျှဝေခြင်း ကို မည်ကဲ့သို ပိုပြီးလုံခြုံစွာ ပြုလုပ်နိုင်သလဲ?
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ထိုနည်းပညာများနှင့်နည်းလမ်းများကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလုပ်ငန်းတခုအနေနဲ့ လေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့် အကြပ်အတည်းကြုံလာမည့်အချိန်မတိုင်မီတွင် သဘာ၀ အလျောက်အလေ့အကျင့်ဖြစ်နေပေလိမ့်မည်။
ဖုန်းကို အော့ဖ်လိုင်း(offline)နဲ့ မှတ်တမ်းတင်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားခြင်း
ဒီမှတ်တမ်းတင်တဲ့ App ကိုသုံးလို့ရမလား?
အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချိန်တွင် ခိုင်လုံအတည်ပြုထားသော မီဒီယာကိုထိန်းသိမ်းခြင်း
ဖုန်းမီဒီယာကို အင်တာနက် သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာမရှိဘဲ အရန်သိမ်းဆည်း back up ထားခြင်း
မျှဝေခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်းအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချိန်တွင် မျှဝေခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း
ပြုခွင့်ကို ပြန်လည်ရရှိရန်၊လူများ၏အခွင့်အရေးဖြစ်သော မှတ်တမ်းတင်ခြင်းကို အောင်မြင်စွာကာကွယ်ရန်၊ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်သတင်းအချက်အလက်ရရှိခွင့်နှင့်လူစုရုံးခွင့်တို့ဖြစ်သည်။ ကံကောင်းသည်မှာ
NetBlocks, AccessNow ကဲ့သို့အဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအနေဖြင့် တက်ကြွစွာစောင့်ကြည့်လေ့လာနေပြီးအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုမျှဝေနေသည်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထောက်ခံပြောဆိုသူများအနေဖြင့်လည်းအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ဆန့်ကျင်သောတရားရေးများကိုနည်းဗျူဟာများဆွဲ၍စေ့စပ်ဆွေးနွေးလျက်ရှိသည်။လူ့အခွင့်အရေးခိုင်မာမှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ကလည်း သူတို့နှင့်တသားတည်း စည်းလုံးစွာရပ်တည်နေသည်။
 Archived in eyewitness, Internet Shutdowns, Tactics, takedowns, Tools and tagged burmese, internet shutdowns.
အော့ဖ်လိုင်း(offline) မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအတွက် ဖုန်းကိုပြင်ဆင်(setup)ခြင်း By Yvonne Ng